Marina Dredged miaraka amin'ny Ellicott Series 370 Dredge - Ellicott Dredges
Dredging Rockhold Creek's Charybdis / Annapolis, MD - Marina Dredged with Ellicott® Brand Dredge
Source: Nivoaka tao amin'ny famoahana Bay Weekly On-Line
Deale no seranan-tsambo Andrefana Shore lehibe indrindra eo anelanelan'i Annapolis sy Solomons. Mba hahatongavana amin'ny rano miaro azy dia voatery tsy maintsy nandalo an'i Scylla sy Charybdis ny tantsambo. Ny firongatry ny maherin'ny Odyssean amin'izao fotoana izao dia nampisy tohodrano maro.
Scylla, ilay vatolampy, no vato vato 900 metatra miaro ny seranana avy any avaratra. Raha mamaky an'i Scylla ianao dia mbola mila miatrika an'i Charybdis. Rano whirlpool ao amin'ny Straits of Messina tanindrazany, Deale's Charybdis no rano goaka ao Rockhold Creek, ilay fantsona mankany amin'ny seranan'i Deale.
Niorina mafy i Scylla, fa isaky ny enin-taona na miady amin'ny Charybdis ny tafika Corps of the Engineers, manaloka an'i Rockhold Creek sahabo ho 7,000 metatra miala ny vavan'ny seranan-tsambo mankamin'ny tetezana ampitan'ny Route 256. Ilay fantsona voatondro federaly dia nototofana farany tamin'ny 1994. Tokony ho fito metatra ny halaliny.
Izao dia sahabo ho iray metatra sy sasany ny sakany amin'ny toerana sasany, araka ny filazan'i Tom Wilhem, mpitantana ny marina ao Herrington Harbour North, eo amoron'ilay renirano. Ireo marinina toa an'i Herrington dia mitazona ny lalan-dry zareo ho azo zahana.
“Manginy fotsiny ny fantsona, ary betsaka ny olona tsy afaka mamoaka ny sambony,” ny ahiahin'ireo olona ireo, ny tantsambo Jack Hanse, izay miantsona eo amoron'ny renirano Shipwright.
Mandeha an-dàlana ny fanampiana, hoy ny Kongresista Steny Hoyer, izay nampiditra ny antsasaky ny tapitrisa dolara tamin'ny volavolan-dalàna House Energy and Water Appropriations tamin'ny taon-dasa.
"Niezaka mafy izahay nanao ny asa haingana araka izay tratra satria zava-dehibe amin'ny vondron'olona rano Deale izany," hoy i Hoyer.
Orinasa roa no nanao tolotra, ao anatin'izany ny South Maryland Dredging of Friendship.
Ilay nandresy, Bay West Inc. an'ny St. Paul, Minn., Dia nitondra kamiao tany amin'ny Ellicott® Brand Series 370 tamin'ny fiandohan'ny volana febroary niaraka tamin'ny iray volana hamita ny fanadiovana azy.
Ny dredge 370, namboarina sy namboarin'i Ellicott® a Division of Baltimore Dredges dia dredge hydraulic azo avy amin'ny pontoon izay manala ny antsanga ary mandefa azy amin'ny alàlan'ny fantsom-pohy mankany amin'ny tranokala. Amin'ity tranga ity, Herrington Harbour North dia manaiky ny fandroana dredge.
Nivoaka tao amin'ny famoahana Bay Weekly On-Line